के कारण सरिता गिरी नेपाली स्वाभिमानलाई सधै घृणा गर्छिन् ? « Bikas Times
के कारण सरिता गिरी नेपाली स्वाभिमानलाई सधै घृणा गर्छिन् ?
सरिता गिरी लेख्छिन्, ‘‘नेपाल फँस चुका है, हम लोग निकालेँगे’
काठमाडौं । सरिता गिरी अर्थात हालसम्म संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद । माइती बिहार कर्मभूमि नेपाल । चार दशकदेखि सरिता गिरीलाई नेपालले नाम, प्रतिष्ठा, पद सबै दिएको छ । उनले नेपाललाई के दिइन् ? त्यो अज्ञात छ, तर उनले नेपालबाट पाउनु पर्ने सबै पाइरहेकी छिन् । तर पनि उनी नेपालको स्वायत्ततामाथि, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेकी छिन् ।
कहिले उनी नेपालको नाम नै बदल्ने कुरा गर्छिन् । कहिले नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा भारतलाई किन नसोधेको भन्दै प्रश्न गर्छिन् । मानौं यिनी नेपालको नभएर भारतको प्रतिनिधि हुन् । माइती देश भारतले यिनलाई के दिन्छ ? यो अज्ञात छ, तर गिरीले नेपाली स्वाभिमानको धज्जी उडाउन कहिले पनि छाडेकी छैनन् ।
तराईमा भारतीय ज्यादतिसँग जुधेर बसेका लाखौं मधेसीहरु छन् । आफ्नो खेतमा जाँदा भारतीय एसएसबीले मधेसी किसानलाई कुटेर लखट्छ । मोरङमा महादेव साहलाई त गोली हानेर मारिदियो । राजविराजमा चार जनालाई गोली हानेर सख्त घाइते बनायो नाकाबन्दीको समयमा । तर यिनी कहिले पनि भारतीय ज्यादतिविरुद्ध बोल्दिनन् ।
कम्तिमा अंगिकृत नै नागरिकता धारण गरे पनि यति लामो समय नेपाल बसेपछि आफ्नो कर्मभूमिप्रतिको अलिकति ऋण त यिनले तिर्नुपर्ने हो । तर अहिले यिनी भनिरहेकी छिन्– सगरमाथा कसको हो विवाद भइसक्यो ।
अहिले सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गर्दा यिनै गिरी धेरै रिसाएकी छिन् । आखिर किन होला ? भारतले नेपाली भूमि मिसाएर नक्सा जारी गर्दा गिरीको आवाज कतै सुनिएन । भारतले सडक बनाउँदा उनको आवाज कतै सुनिएन ।
आजै पनि गिरीले फेसबुकमा लेखिन्, ‘नेपाल फँस चुका है, हम लोग निकालेँगे ।’ यो पोस्ट तुरुन्तै हटाइन पनि । एक फेसबुक प्रयोगकर्ता शैलेन्द्रराज नेपालले जवाफ फार्कउन खोज्दौ खोज्दै गिरीले स्टाटस हटाइन । तर नेपालले स्क्रिन सट राखेर सार्वजनिक गरेका छन् ।
भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा त यिनी खुसी हुनेहरुको लाइनमै थिइन्, कुरै भएन । आखिर यिनलाई माइती देशले के त्यस्तो चिज दिन्छ र आफ्नो कर्मभूमिप्रति यति धेरै समस्या छ होला ? टिप्पणी
वजेटमा एमसीसी घुसाएसंगै नेकपामा भैंसेपाटी गठबन्धन ब्यूँतियो
आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी परियोजना अन्तरगतको अनुदान घुसाएपछि सत्तारुढ नेकपामा फेरि
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्धारा विश्व स्वास्थ्य संगठनसंगको सवै सम्बन्ध तोडेको घोषणा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)सँग अमेरिकाले सबै सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेका छन्